Mpitandro filaminana : Homena lanja ny vehivavy -
AccueilSongandinaMpitandro filaminana : Homena lanja ny vehivavy
30/11/2018 admintriatra Songandina 0
Raha ny fenitra manerantany tokony ny iray ampahadimy ny mpisehatra amin’ny tontolon’ny fitandroana ny filaminana dia vehivavy. Toy ny firenena rehetra manerantany anefa mbola tsy voahaja izany eto Madagasikara. Olana, tsy mankatoa ny fisian’ny vehivavy amin’ny andraikitra sarotra ary eritreretina fa an’ny lehilahy. Eo koa ny lafiny foto-drafitr’asa satria sarotra no mandany vola ny fanantanterahana izany, hoy ny Sekretera maharitra momba ny fandriampahalemana ao amin’ny filan-kevitra ambony momba ny fiarovana satria tsy maintsy arovana ny maha mampiavaka azy amin’ny maha vehivavy azy izay. Fa na izany aza anefa, efa maro ihany ny vehivavy mandranto fianarana ao amin’ny akademia miaramila, sekolin’ny polisy ary ny zandarimaria kanefa mbola tsy ampy izany. Manoloana izay indrindra, hisy ny fanomezana lanja kokoa ny maha malagasy antsika ireo vehivavy ireo mba handray anjara mavitrika amin’ny fidirana ho mpitandro ny filaminana na ao amin’ny tafika, hoy hatrany ity Sekretera maharitra momba ny fandriampahalemana ao amin’ny filan-kevitra ambony momba ny fiarovana, ny Jeneraly Rakotonirina Léon Richard. Tafiditra ao anatin’ny firenena hanaovana fanentanana ny hanomezan-danja ny vehivavy amin’izay fenitra ny fandriampahalemana izay i Madagasikara ary isan’ny ezaka atao anatin’ilay rafitra fanovana momba ny sehatra ny fandriampahalemana. Izany hoe, hisy ny fanovana fomba fijery amin’ny fametrahana ny vehivavy amin’ny sehatra tokony hisy azy ary hanohana an’i Madagasikara amin’izany sehatra izany ny firenena mikambana amin’ny alalan’ny fanitsiana ny rafitry ny filaminana. « Zavatra midadasika ny fitandroana ny filaminana. Eo ny fitandroana ny filaminana fotsiny fa eo koa ny fandraisana anjara amin’ny fitandroana ny filaminana na mpitsara na polisy na zandary izay vao manana anjara toerana eo amin’ny mpitandro ny filaminana. Raha tarehimarika ny jerena, ny polisy efa ela no misy vehivavy fa aty amin’ny tafika no voahaingana ihany. Efa nisy ny vehivavy manam-boninahitra nitondra kaompania anivon’ny tafika tao amin’ny akademia miaramila, misy manam-boninahitra vehivavy amin’izao fotoana izao mpanamboatra fiaraha-manidina ao amin’ny “base aeronavale” Ivato”, hoy ny fanamarihan’ny Sekretera maharitra momba ny fandriampahalemana ao amin’ny filan-kevitra ambony momba ny fiarovana, ny Jeneraly Rakotonirina Léon Richard. Nampahafantarin, omaly, teny Anosy tamin’ny alalan’ny atrik’asa ny zava-misy momba ny fampandraisana anjara ny vehivavy amin’ny sehatra ny fandriampahalemana, izay tena mbola mila ezaka araka ny fanamarihan’ny firenena mikambana.
Mitohy hatrany ny asa fampandrosoana sy ny tetikasa atolotry ny Filoham-pirenena malagasy Hery Rajaonarimampianina mivady. Misongadina izany amin’ny fanomezana lanja manokana ny sehatry ny fahasalamana, toa ny andron’ny omaly, 24 aogositra, teny amin’ny lapan’ny Kolontsaina ...Tohiny